Dowlada Mareykanka oo Safaaradeeda ka fureeysa magaalada Muqdisho – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaDowlada Mareykanka oo Safaaradeeda ka fureeysa magaalada Muqdisho
Hiiraan Xog, Dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah dib albaabada ugu furtay safaaraddeedii magaalada Muqdisho ee casimada Soomaaliya kadib markii ay ku xirantay dagaalladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay 25 sano ka hor.
Mareykanka oo ka hadlay dib u furista safaaraddiisa Soomaaliya ayaa ku timaamay guul taariikhi ah oo wax badan ku soo kordhin karta horumarka ay hiigsaneyso dowladda Soomaaliya.
“Arrinkan taariikhiga ah wuxuu muujinayaa horumarka ay Soomaaliya ku tallaabsanaysay sanadihii ugu dambeeyay, furitaanka safaaradda Mareykanka ee Soomaliyana waa tallaabo kale oo horay loo qaaday laga soo billaabo 2013-kii oo ahayd kolkii aan aqoonsannay dowladda federaalka Soomaaliya” ayaa lagu yiri warbixin kasoo baxday waaxda arrimaha dibadda Mareykanka.
Safiirka cusub ee dhawaan Mareykanka usoo magacaabay Soomaaliya, Donald Yamamoto oo warbixin siiyay idaacadda VOA-da ayaa todobaadkii hore ka dhawaajiyay in ay damacsanyihiin raridda safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo muddooyinkii dambe ku shaqeynaysay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Madaxweynaha Soomaaliya,mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha dowladda Mareykanka usoo magacawday Soomaaliya Donald Yamamoto.
Dowladda Mareykanka ayaa Soomaaliya u ballan qaaday in ay kala shaqeyn doonto arrimaha ammaanka, waxbarashada, horumarinta dhaqaalaha, dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga.